I-China North America- Isevisi ye-CTIA nokuhlola | I-MCM
-Enyakatho Melika- CTIA
HatYINI i-CTIA CERTIFICATION?
I-CTIA, isifinyezo se-Cellular Telecommunications kanye ne-Internet Association, yinhlangano yomphakathi engenzi nzuzo eyasungulwa ngo-1984 ngenhloso yokuqinisekisa inzuzo yabasebenza, abakhiqizi nabasebenzisi. I-CTIA inabo bonke opharetha base-US nabakhiqizi abavela kumasevisi omsakazo weselula, kanye nakumasevisi wedatha engenantambo nemikhiqizo. Isekelwa yi-FCC (Federal Communications Commission) neCongress, i-CTIA yenza ingxenye enkulu yemisebenzi nemisebenzi ebisetshenziselwa ukwenziwa nguhulumeni. Ngo-1991, i-CTIA yakha uhlelo lokuhlola umkhiqizo olungachemile, oluzimele noluphakathi nendawo embonini engenantambo. Ngaphansi kohlelo, yonke imikhiqizo engenantambo ebangeni lomthengi izothatha izivivinyo zokuhambisana nokuthi lezo ezihambisana namazinga afanele zizonikezwa yini ukusebenzisa ukumaka kwe-CTIA nokushaya amashalofu ezitolo emakethe yezokuxhumana yaseNyakatho Melika.
I-CATL (ILabhorethri Yokuhlola egunyaziwe ye-CTIA) imele amalebhu agunyazwe yi-CTIA ukuhlola nokubuyekeza. Imibiko yokuhlola ekhishwe ku-CATL izovunywa yi-CTIA. Ngenkathi eminye imibiko yokuhlolwa kanye nemiphumela evela kwe-non-CATL ingeke ibonwe noma ingafinyeleli ku-CTIA. I-CATL egunyazwe yi-CTIA iyahlukahluka ezimbonini nasezitifiketini. I-CATL kuphela efanelekile ekuhloleni nasekuhlolweni kokuhambisana nebhethri okufinyelela isitifiketi sebhethri sokuhambisana ne-IEEE1725.
Amazinga Wokuhlola Amabhethri we-▍CTIA
a) Isidingo Sesitifiketi Sokuhambisana kohlelo lwebhethri ku-IEEE1725-- Kusebenza kuma-Battery Systems anamaseli owodwa noma amaseli amaningi axhunywe ngokufana;
b) Isidingo Sesitifiketi Sokuhambisana kohlelo lwebhethri ku-IEEE1625-- Kusebenza kumaBhethri Systems anamaseli amaningi axhunywe ngokufana noma kuzo zombili ngokufana nochungechunge;
Amathiphu afudumele: Khetha ngaphezu kwezindinganiso zesitifiketi ngokufanele zamabhethri asetshenziswa kumaselula nakumakhompyutha. Ungayisebenzisi kabi i-IEE1725 ngamabhethri kumaselula noma i-IEEE1625 ngamabhethri akumakhompyutha.
● Ubuchwepheshe Obunzima: Kusukela ngo-2014, i-MCM ibilokhu ihambele ingqungquthela yokupakisha amabhethri ebanjwa yi-CTIA e-US minyaka yonke, futhi iyakwazi ukuthola ukuvuselelwa kwakamuva futhi iqonde izindlela ezintsha zenqubomgomo nge-CTIA ngendlela esheshayo, enembile futhi esebenzayo.
●Ukufaneleka: I-MCM ivunyelwe yi-CATL yi-CTIA futhi iyafaneleka ukwenza zonke izinqubo ezihlobene nokuqinisekiswa okubandakanya ukuhlolwa, ukuhlolwa kwefektri nokubika ukulayishwa.
Langaphambilini IECEE- CB
Olandelayo: Ezokuthutha- UN38.3
Intengo Yesitifiketi seCtia
Inqubo Yesitifiketi seCtia
Insiza Yezitifiketi zeCtia
Isikhathi se-Ctia Lead
Imibhalo Yezobuchwepheshe yaseCtia
Imfuneko Yezobuchwepheshe yaseCtia
Izinto Zokuhlola zeCtia
Indlela Yokuhlola ye-Ctia
Umbiko Wokuhlola weCtia
ICtia Testing Lab
I-Laboratory Yokuhlola i-Ctia
Intengo Yokuhlola ye-Ctia
Insiza Yokuhlola i-Ctia
Isikhathi sokuhlolwa kweCtia